Visitor is reading ओहो कत्रो हो त्यो ?
Visitor from US is reading Green Card Apply
Visitor from US is reading ROOOM FOR RENT
Visitor from US is reading How does Nepal BBS degree works here?
Posted on 10-30-19 10:04 PM Reply [Subscribe]
तिहारमा फेरि चितुवाले मान्छे खायो, दिउँसै आउँछ आँगनमा चितुवा ? (स्थलगत रिपोर्ट) तनहुँको भानु नगरपालीका पछिल्लो समय नरभक्षी चितुवाको त्रासमा छ । स्थानीयहरु हरेक दिन बाघ (चितुवा)को डरमा बाँचिरहेका छन् । अघिक मात्रामा बन क्षेत्र भएको र बनमा चितुवाले खाने जनावर केही नभएकाले चितुवा घर गाउँ पसेको धेरैले अनुमान लगाएका छन् तर पनि भानु नगरपालिकासंग बाघको संख्या तथ्याङ्कमा छैन ।
बारम्बार आक्रमण र ज्यान जान थालेपछि स्थानीयहरुले धार्मिक किम्बदन्ती बारे पनि कुरा उठाएका छन् । देबी बौलाएको, मानिस नै बाघ बनेको जस्ता कुराहरु पनि आएका छन् । बाघले घडी समेत लगाएको भन्ने हल्ला समते गाउँमा फैलिएको छ । तर भानु नगरपालिकामा बिगत दुई बर्ष देखी चितुवाको आक्रमणकै कारण छ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने चार जना घाईते भएका छन् ।